Bunny_Bloony | MyanmarReferral
← Bee Commando
Gangster Pair →
November 20, 2011Posted by lathaphotoke	Y3.com – 9500+ Free GamesY3.com – 9500+ Free Games
This entry was posted in Online Games and tagged Bunny_Bloony. Bookmark the permalink.
အဖြူရောင်သံစဉ်နားဆင်ရန်	BBC Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)Wednesday Morning:Monday Morning:Monday Morning:Sunday Morning: RFA Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-22 17:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-22 14:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-22 13:29DVB TV broadcast	14042013 Asia News and Asia View	National League for Democracy TV	PC-Ban-ki Mon	Archives	Select Month March 2012 (1)
MYANMAR CALENDAR	ကြက်ကြော်မွှေးမွှေးလေး
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မရဲ့ မောင်နှမများကို ဒီနေ့တော့ အင်ဒိုနီးရှားစတိုင်လ် ကြက်ကြော်လေး ချက်ကျွေးပါရစေနော်။ ဒီမှာတော့ ကြက်ကြော်ကို AYAM GORENG လို့ ခေါ်ပါတယ်နော်။ ကျွန်မဒီမှာ နေခွင့်ရတဲ့ အိမ်မှာတော့ ကျွန်မ အမေက ထမင်းဟင်းချက်ကျွေးတော့ ကြက်ကြော်လေးက အရမ်းကို မွှေးပြီး စားကောင်းနေတာမို့ ဘယ်လိုကြော်ရတယ်ဆိုတာကို မေးပြီး ကြော်ထားတဲ့ ကြက်ကြော်
ကြက်ကြော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ ကြက်သား ရင်ပုံသား သို့မဟုတ် ပေါင်သား ၁ ကီလို၊ စပါးလင် ၅ ပင်၊ ချင်း လက်သုံးဆစ်၊ ပဒဲကော လက်သုံးဆစ်၊ နံနံစေ့ အနည်းငယ်၊ နနွင်းတက် (အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့ နနွင်းမှုန့်အစား နနွင်းတက်အစိမ်းကိုသုံးပါတယ်နော်) လက်သုံးဆစ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၁၀ မွှာ၊ ရှောက်ရွက်၊ ဆားအနည်းငယ်နဲ့ [...] Read More ယနေ့ ကြွလာမိတ်သဟာများ	www.sportwettenmeister.com
Top ArticlesMyanmarCelebrity	Yangon Thingyan Festival 2013, In Myanmar	MTV	Ninja - Chit Thu Wai	VOA Burmese TV	Burmese TV Update 05-21-2013	>